CICADA WAA CAYAYAANKA HEESAHA! HAB-NOLOLEEDKA, DEEGAANKA - XOOLAHA
Cicadas - cayayaanka heesaha: muuqaalada nolosha, sawirada
Qaar badan oo naga mid ah waxay maqleen heesaha qorraxda ee jilayaasha beerta ama dabiiciga ah. Hase yeeshee caleemaha iyo cirridka maaha kuwa kaliya ee ku heesaya cayayaanka. Maanta waxaan ka hadli doonaa arrimaha ku saabsan ciyaalka, muuqaalka iyo qaab nololeedka.
Waa maxay qadada
Cicadas waa cayayaanka waaweyn ee laga helo dunida oo dhan. Qiyaastii laba iyo badh kun oo noocyada cayayaanka ayaa lagu yaqaanaa sayniska, intooda badanna ku nool dalalka leh cimilada kulul, kaliya siddeed iyo tobankii waa qaybta yurub. Ka fikir qaymaynta sayniska cayayaanka:
Qoyska Sheeko Cicadas
Dhulkeena, laba nooc oo ah heesaha heesaha waa caadi: caadi caadi ah iyo buur, iyo muuqaalada muuqaalkooda iyo noloshooda ayaa loo tixgelin doonaa.
Ma taqaanaa? Sawirka cayayaanka ayaa inta badan loo adeegsaday gabayada, farshaxanka muuqaalka ah, waxaa lagu sawiray qadaadiicda iyo walxaha qurxinta iyo nolol maalmeedka. Tusaale ahaan, qadaadiicii hore ee Giriigga ee dhinaca dhinac ah waa heeso heeso ah.
Noocyada 'caadiga ah' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'buug-yaraha dhuxusha': waxa uu leeyahay midab madow oo jirka ka mid ah, madaxa iyo dibedda jeexdin jilicsan. Dhererka jirka ee la wadaago baalashka waa in ka badan shan sintimitir.
Kicada buuradu waxay ku yar tahay cabbirka: dhererka jidhkiisu wuxuu leeyahay baalkiisu waa wax aan ka badneyn 2.5 cm. Midabku waa mid madow, oo ku dhowaad madow, waxaa jira waxyaalo badan oo ah midab khafiif ah.
Caleenta geedaha cufan waa mid ballaaran, oo ka sii ballaadhan xagga hore ee gadaasha, madaxa. Madax ka mid ah buurta, sida lid ku ah, waxay leedahay qoqsi aad u badan.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh inaad wax ka barato cayayaanka sida barafka (guga, poduras), qoyaanka daawada, boodhka jilicsan, ladybug, boodhadhka, duqsiyo kufaha ah, qashinka tufaaxa ah, maraqa kaabajka, maraqa kaabajka, caleen-cagaarka, indhaha dahabiga ah iyo jarjar.
Dhinacyada labada dhinac ee labadaba waxaa jira laba indhood oo waaweyn oo ah qaab dhismeed adag, qaybta dhexe waxaa ku yaal saddex indhood oo sahlan, oo leh qaab ah saddex xagal. Laga yaabe, thanks to dhismahan iyo tirada indhaha, cayayaanka ayaa leh aragti fiican oo daboolaya meel bannaan.
Antenna antennae oo leh jajabyo xasaasi ah iyo proboscis ayaa ku yaal qaybta hore ee "bohol".
Baalasha iyo lugaha
Labada noocba waxay leeyihiin baalal hufan. Marka ay laaban yihiin, waxay gebi ahaanba daboolaan baalalkooda danbe, maaddaama ay ka badan yihiin. Dhinaca dusha sare ee garabka ayaa mugdi ama rinji ku leh midabka caanaha ee riyaha.
Dhismaha lugaha wuxuu ka duwan yahay kaliya tirooyinka maqaarka ku jira miskaha: sheyga caadiga ah wuxuu leeyahay laba maqaayad, buurana wuxuu leeyahay saddex cajaladood. Qaybta bawdada ee lugaha ayaa si weyn uga sii dheregsan kubka cylindrical. Guud ahaan, shakhsiyaadka waxay leeyihiin saddex lugood oo lugood ah, iyagoo ku dhamaata ciriiryo adag.
Caloosha labada noocba waa cufnaanta, dhumucdeeda dhedigga qaybta hoose, halkaas oo ukunta dhirta ku taal. Iyadoo caawimadeeda dhedigga ah waxay dhirtaa alwaax khafiif ah ama dhar cagaaran oo dhir ah oo ku dhejis ah. Ragga, waxaa sidoo kale jira hay'ad isku-dhafan oo ay bacrimiso gabadha.
Cayayaanka ayaa loo tixgeliyaa xubnaha ugu mudan muddada dheer ee fasalka - noocyada qaar waxay ku nool yihiin ilaa toddoba iyo toban sano.
Ma taqaanaa? In xabaashii Boqorka Faransiiska Childeric I, dahab dahab ah oo leh qoryaha garnet ayaa la helay.
Geedka-geedku wuxuu doorbidaa dhul-beereedka koonfurta, Crimea, Caucasus iyo Transcaucasia. Cayayaanka ayaa ku habboon cimilada hoose ee aagagaan leh xagaaga kulul iyo qallalan.
Milkiilaha gurigu wuxuu badanaa la kulmaa dulin. Akhri sida looga takhaluso baalallay, injirta qoryaha iyo baranbarada aqalka.
Noocyada shayada buurta waxaa loo qaybiyaa dhul ballaaran: marka lagu daro gobollada kor ku xusan, cayayaanka waxay ku nool yihiin dhulka Ruushka, galbeedka iyo waqooyiga Yurub, wadamada Aasiya. Aragtidu waxay u egtahay heerkulka isbeddelka iyo huurka badan.
Cayayaanka waxay waqti ku qaataan in ay u furan yihiin qoraxda, meelaha si fiican u diiran:
Steppes iyo seeraha;
cirifka cagaaran ee buuraha.
Ku xoqidda jilifaha jilicsan ama unugyada caleemaha dhirta leh ee la yiraahdo probcis fiiqan, ceegaashu waxay nuugaan soodhada oo hoos u dhigaya asliga ah. In hawada, casiir adag yahay, soo jeestay nooc ka mid ah Boorash, taas oo sidoo kale nafaqo leh.
La qabsashada laanta dhirta, inta lagu jiro cayayaanka maalinlaha ah ee qorraxda, quudinta, duulaya duurka si ay u noqoto baadiyaha ama geed (dhismaha baalashadu waxay u oggolaanayaan inay si fiican u duulaan). Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah ee ku saabsan heesaha habeenkii ee cicadas, dhacdadani waa halkii laga reebo. Dhawaaqyo aan caadi aheyn oo soo jiidanaya dareenka cayayaanka haweenku sameeyaan maalintii. Habeenkii, noocyada qaar ayaa u heesaya in sidan ay isku dayaan in ay naftooda ka ilaaliyaan ugaarsadaan. Sidaa daraadeed, nooc kasta oo hoosaad ah ayaa leh mawduuc gaar ah iyo astaamaha codka. Kooxda "heesaha" waxaa loogu talagalay si ay beeraleydu u aqoonsan waayaan ilo gaar ah.
Wareegga nolosha iyo dhalmada
Kadib markaad lammaaneeysid, haweenka, dhoobo jilbaha dhirta (caadiga ah) ama afkoda cawska iyo caleemaha cagaaran (buur), ayaa lumen lumen ee ukunta. Tirada ukumaha xaydhku waxay gaari karaan lix boqol oo qeybood.
Ka dib bil iyo badh ka dib, dirxiga ayaa dillaacaya - shaqsiyaadka qarxa, kuwa aan xirneyn oo leh shaar ba'an oo qashin ah iyo nooc cidhib ah. Dhalinyaradu waxay ka qodayaan badbaadadooda gaarka ah ee ciidda, waxay u dhowyihiin nidaamyada asaasiga ah ee dhirta, casiirka kuwaas oo iyaga ku quudin doona. Hab-nololeedka dhulka hoostiisa ayaa ah mid aad u dheer, illaa inta baalasha baalashadu u muuqdaan: aragtida guud waxay ka bilaabantaa labo ilaa afar sano, aragtida buuruhu waxay jirtaa ilaa lix sano.
Si loo beddelo shakhsi qaangaar ah, ubaxa waxay dillaacaan dusha sare, halkaasoo, kor u kaca geed ama geedka, waxay xirxiraan. Ka dib markii la gooyey, jirka oo ka mid ah dadka qaangaarka ah ayaa weli aan la xoojin, waxayna qaadanaysaa qiyaastii lix maalmood si ay u hesho dabool adag. Shaybaarrada dadka waaweyn waxay ku nool yihiin ilaa saddex bilood. Dhalada ayaa kor u kacda dusha
Ku heesida cayayaanka
Ragga maahil oo keliya ma heesaan, laakiin sidoo kale dheddigyada noocyada badan, inkastoo codadka ay soo saaraan aan la maqlin dhegahayaga. Waanu fahmi doonaa sida dhabta ah ay u heesayaan.
Labo kabood oo yaryar, oo ku yaala gudaha caloosha ee ku yaal dhabarka labada lugood, oo la yiraahdo suxufiyiin, waxay soo saaraan dareenka dhawaaqa. Cayayaanka ayaa si gaabis ah u gaabinaya murqaha caloosha, iyo dulmigu wuxuu sameeyaa si dhaqso ah oo ay u muuqdaan inay u eg yihiin melod adag. Codka ay sameeyeen suxufiyiin waxaa lagu maqli karaa masaafo sideed boqol oo mitir ah.
Kaalinta dabeecadda iyo nolosha aadanaha
Cicadas dabiiciga ah waa xiriir muhiim u ah silsiladda raashinka: waxay yihiin cunto loogu talagalay shimbiraha, qorraxda, kalluunka, dawacooyinka, laakiin tani ma aha doorka kaliya ee muhiimka ah. Cunista dhirta, cayayaanka ayaa noqon kara faa'iido iyo waxyeello, tusaale ahaan, beeraha. Tixgeli dheeraad ah.
Guryaha waxtarka leh iyo waxyeelada leh
Iyadoo la eegayo dabeecadda aan shaki lahayn, waxay keeni karaan waxyeelo badan oo hadhuudh ah, khudradda, khudradda iyo miraha iyo xitaa qoob-ka-dhalidda, ubaxa. Cayayaanka waxay u dhigmaan cayayaanka sida cirridka. Jaqidda dhammaan dhirta iyo casiirka, waxay yareeyaan dhalidda, ama xitaa gabi ahaanba burburin dhaqanka.
Haddii aad rabto in aad beertaada ka ilaaliso cayayaanka, fiiri si dhow u eeg sida loo takhaluso dhirta, cockchafer, lulooti dhulka, weevil, lowska jilicsan, caarada iyo kuwa lamid ah.
Isla mar ahaantaana, duurjoogta ka qaybgalka cayayaanka, tirada dhirtu waa la nidaamiyaa. Intaas waxaa dheer, cayayaanka ayaa loo tixgeliyaa habka ciidda-abuurka ee nidaamka deegaanka: dhimanayaan, waxay ku daraan ciidda leh humus.
Wadamo badan oo Aasiya, Afrika, magaalooyinka qaarkood ee Maraykanka, Australia waxaa jira beeraha beerista cayayaanka la cuni karo, oo ay ku jiraan ceegadas.
Waa muhiim! Cayayaanka Winged waxay qaadaan cudurrada kala duwan ee warshadda ilaa dhirta.
Qaadashada labada qof ee naaskooda gaarka ah, mabda 'ahaan, ma aha mid adag: haddii aad qabato gacmahaaga, waxaad u baahan tahay inaad ku qabatid baalasha, adoo riixaya gadaal, laakiin way sahlan tahay in la isticmaalo shabakad.
Cayayaanka waxay ku jiraan sanduuqyo leh mesh-ku-meshed muraayadda hawada, iyo shakhsiyaadka marxaladaha kala duwan ee horumarka ayaa si gooni ah u nool. Weelasha caaga ah ee leh hawo lagu sameeyo hawo-qaadasho ayaa ku haboon beer yar.
Dabcan, cayayaanka ayaa bixiya xaalado sida ugu dhow dabiiciga ugu macquulsan: waxay ilaaliyaan qoyaan iyo qoyaan lagama maarmaanka ah. Si aad tan u sameyso, waxaad iibsan kartaa qalab gaar ah oo leh heer-kuleyl iyo saacad.
Si loola dagaallamo khashinka cayayaanka waxay u isticmaalaan diyaargarow gaar ah - cayayaanka.
Qeybta hoose ee kulul, carrada waxaa lagu shubay kaas oo dirxiga uu horumariyo - marka ay koraan, waxaa lagu shubaa sanduuq gaar ah oo aan lahayn dhul. Iyada oo guryaha cayayaanka ay isticmaalaan baakadaha buluugta ah, unugyada kuwaas oo u adeega sidii guri gaar ah.
Cayayaanka waxay bixiyaan cunto - cawska cusub, dhirta dhirta kala duwan, ha iloobin biyaha.
Waa muhiim! U hubso inaad ilaaliso nadiifinta godadka, gaar ahaan marka ay koraan cuntada.
Cuntooyinka khafiifka ah
Noocyada cayayaanka sida cuntooyinka cuntadu waxay bixiyaan qadar badan oo borotiin ah, oo ay ku jiraan. Intaa waxaa dheer, qolof ay leeyihiin chitin - a deris ah ee chitosan, kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta miisaanka.
Haddii aad rumaysan tahay inaad ku aragtid baqshiishada, inaad dhadhamiso saxan khudradda ah sida cagaarshow. Ma aha in aanad caqli gal ahayn, waxaanu soo bandhignaa liiska soodhadhka ugu caansan ee makhaayadaha qaarkood:
pizza leh kooxo;
la dubay on skewer ah;
lafdhaqaaqa lagu sifeeyey khamri cad.
Si loo soo koobo: dhageysiga cayayaanka xayawaanka ee duurjoogta waa mid xiiso leh, waayo dad badan ayaa dejiya dareemayaasha. Sida loo isticmaalo arthropods ee cuntada - waa arrin u dhadhan qof kasta.